Hiran State - News: Dadaalo iyo gurmadyo loogu gar gaarayo shacabka Hiiraan oo qurbaha ka socda
Dadaalo iyo gurmadyo loogu gar gaarayo shacabka Hiiraan oo qurbaha ka socda
Khamiis 23,December2010(HSOL) Kedib abaaro ba'an oo ku dhuftay inta badan gobolada Hiiraan State ayaa waxaa maalmahii ina dhaaftay laga soo deyrinayey xaalada inta badan shacabka ku nool halkaas kedib abaaro ba'an oo ku dhuftay dhulka miyiga ah.
Afhayeenka Hiiraan State Ambassador Xooshow oo maalintii shaleyto aheyd shabakada Hiranstate.com kula hadlayey qurba joogta reer Hiiraan kana codsay in la gaarsiiyo amaba loo fidiyo gurmad deg deg ah shacabkaas ayaa hada u muuqato mid ay wax ka qabanayaan qaar ka mid ah qurba joogta reer Hiiraan kuwooda ku nool waqooyiga America kedib markii ay isla xaleyto ay ka bilaabatay magaalada Ohio Columbus shir wax loogu qabnayo amaba gar gaar deg deg ah lala gaarayo shacabkaas. arintaas oo ay soo qaban qaabiyeen rag uu ka mid yahay gudoomiyaha qurba joogta Hiiraan State Dr Abdulqadir Ali Abdi ( Xuurka).
Abaaraha ka jira Hiiraan ayaa waxey dadka qaarkii qireen hadaan xaalada meesha ay hada joogto wax laga qaban in ay xaalada noqon doonto mid mudo lag ahseegeyn doono, sida ay ku nuux nuuxsadeen waxgarad ku sugan Hiiraan iyo dad aqoonyahano ah oo qaarkood indhahooda saaray meelaha ay sida weyn abaaruhu ugu dhufteen ee miyiga fog ee HS.
Hadaba waxaa jaaliyadaha reer Hiiraan ee ku nool Yurub, Africa iyo Asia lala socodsiinayaa mar labaad iyo mar sedexaad iney shacabka walaalahood ah gar gaar u fidiyaan intiiba ay awoodi karaan.
· admin on December 23 2010 13:46:37 · 0 Comments · 1729 Reads ·
10,312,348 unique visits